Maalinta: Febraayo 28, 2019
Laba Tareen Isku-Burbursan Oo Ku Dhacay Brazil 1 Dhimatay 8 Injured
Magaalada Rio de Janeiro, makaanik ayaa la diley qof 2 qofna wuu ku dhaawacmay shil ka dhacay isku dhacii tareenka xNUMX. Shalay xarunta Sao Cristovao, tareenka dhulka hoostiisa ku yaal wuxuu ku dhacay tareen kale oo ku yaal magaalada gadaashiisa gadaashiisa [More ...]
Si si wax-ku-ool ah looga hortago dababka suurta galka ah ee ka dhici kara khadka tareenka ee Metro Istanbul, jilitaanka joogtada ah ee dabka iyo qodista waxaa lagu qabtay khadka metrooga M5 Üsküdar-Çekmeköy. Umraniye, Uskudar, Yenidogan [More ...]
Codsiga Wadada Iskuduwidda ee Eskisehir waa mid sii socota
Ayadoo la raacayo dalabka wadada la taaban karo, degmada Eskişehir ayaa saxiixday mid kale oo ugu horeeya magaalada. Concnönü codsi 'Wadada laamiga ah', oo la isku dayey oo natiijooyin guul laga gaadhay adduunka oo dhan, waxay ku taal İnönü [More ...]
Borotokool ayaa la saxeexay inta udhaxeysa Dowlada Hoose ee Manisa iyo Manisa Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida leh ee 155 Magaalada Koontaroolay. Duqa Magaalada Manisa Metropolitan Cengiz Ergün iyo Madaxweynaha Iskaashiga Erdoğan Akatmacı [More ...]
Imtixaanada Marmaray Dhibaatooyinka qaarkood
Gebze-Halkalı Marmaray Line inta lagu gudo jiro wadista imtixaanka, xitaa gaadhiga gawaarida lagu soo dejiyay ma uusan ku habooneyn barxad sababtoo ah khaladaadka cabirka iyo Marmaray ayaa ku fadhiistay. Gebze-Halkalı In kasta oo shaqada Marmaray Line ay sii socoto, 1 ayaa la dhammeystirey oo la furay bil gudaheeda. [More ...]
Heart of Railways Eskisehir
Martida ee TV ES ku sii daayey Layout barnaamijka Chamber of Farsamada Injineerro (MMO) Madaxweynaha Atila Tumxuk, ayaa sheegay in TÜLOMSAŞ waa xoog awood soosaarka xadiidka xawaaraha sare wuxuu noqon doonaa, "Tani Tareennada State, qalbiga Turkey," ayuu yidhi. Injineerada farsamada [More ...]
Samsun TSO Murzioğlu, "Goobta Shirkada Goobta OSB waa in ay ku dhawaaqdo Samsun
Salih Zeki Murzioğlu, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Samsun (TSO), ayaa yiri: ak hadaan rabno in Samsun lagu xasuusto warshadaha iyo dhoofinta, aagga markabka iyo dhul-beereedka Aksa, [More ...]
Tababaraha Jasiiradda oo soo reynaya saraakiisha TCDD
Saraakiisha TCDD maanta waxay yimaadeen Adapazari, saldhiga Adapazari iyo Mithatpasa station ayaa la baarayaa. Sida ay sheegayaan wararka ka Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Saraakiisha gaaray wadahadalo in baaritaan Adapazari. Ada Express ayaa hada ah [More ...]
dib u cusboonaysiinta xarumaha istanbulkart wax walba oo aad rabto inaad ka ogaato oo ku saabsan saacadaha shaqada ee wararkayaga… goorma ayay xarumaha cusboonaysiinta istanbulkart subaxa hore u furaan galabtiina? Halkan, xarumaha cusboonaysiinta ee istanbulkart saacadaha furitaanka 2019 ın [More ...]
Shaqaalaha 9 iyo maareeyaha Ganacsiga-Dhismaha ee 2 oo mudaaharaadayey sababta oo ah mushaharkooda kama helin Khadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa ayaa la sii daayay ka dib xiritaanka Ç. Qandaraaslaha ugu weyn ee Haysta Holding waa Bursa [More ...]